Mkpa mmanụ dị mma nke na-esi ísì ọma - Kedu nke bụ ọkacha mmasị gị? | AromaEasy
Mmanụ ndị dị mkpa na-esi isi ọma - olee nke kachasị gị mma?
Ihe na April 11, 2020 April 11, 2020 by Matt
mmanụ dị mkpa nke na-esi isi ọma
Otutu mmadu nwere ike ikwu hoo haa ihe uto ha. Ma, ọ dịtụla mgbe anyị chere echiche banyere ịjụ onwe anyị ihe kpatara ha ji bụrụ ọkacha mmasị anyị?
Uche nke ísì bụ naanị uche anyị nwere nke na-ejikọ njikọta nke mmetụta uche nke ụbụrụ anyị. Nke a na-egosi na ihe anyị na-anụ nwere mmetụta nke anyị etu anyị si enwe mmetụta na ahụmịhe anyị gbara ụwa gburugburu. N'ịkwuputa nke ahụ, anyị niile nwere ọnọdụ uche pụrụ iche na nhọrọ ndị mmadụ na-eme na-aga kwa ụbọchị. Mgbe oge na-aga, oke anyị chọrọ maka isi ga-agbanwe wee gbanwee.
Chọta mmanụ dị mkpa kachasị amasị gị
Nyefee mmanụ dị mkpa
Mmasị maka okpukpo bụ isiokwu dị mkpa. Reallyfọdụ na-amasị lavender mmanụ dị mkpa ma na-azọrọ na ọ bụ mmanụ dị oke mkpa na-ere ahịa. Ekwenyere na ọ bụ mmanụ kacha mma maka ụra, ma ọ bụ mmanụ kachasị mkpa iji nyere aka mee ka akpụkpọ ahụ na-ewe iwe. Ikwu na ọ bụ otu n’ime ezigbo mmanụ na-esi isi ọma; otu o sila dị, nke a bụ okwu echiche. Ọtụtụ ndị mmadụ kwukwara na ha ahụghị lavender's floral and herbaceous senti.
Fọdụ ndị hụrụ senti nke vetiver n'anya. Mgbọrọgwụ nke ahịhịa a na-ekpo ọkụ na-eweta mmanụ dị mkpa bara ụba, nke ụwa, na nke anwụrụ ọkụ. N'otu aka ahụ, ụfọdụ ndị na-anụ mmanụ mmanụ a wee hụ na ọ na-esi ísì ụtọ dị ukwuu. Vetiver bụ ihe ndabere dị ịrịba ama-- ọ nwere ike inye ngwangwa na omimi na ngwakọta. Naanị ntakịrị ntakịrị mmanụ a gbakwunyere na ngwakọta nke ifuru ma ọ bụ citrus mmanụ ndị dị mkpa nwere ike ịmepụta aghụghọ nke na-eweta ngwakọta ngwakọta na nhazi.
Aromatherapy bụ n'ezie ihe na-esi isi, ma ọ bụ isi ísì ụtọ - iji ísì ụtọ iji nyere ahụ, uche, na mmụọ aka ka ọ dị mma. Ihe ndị dị mkpa bụ ngwaọrụ dị irè iji nyere usoro a aka.
Ihe na-enye ume, na-enye ume, ma na a joyụrị, mmanụ dị mkpa bụ isi. Citrus mkpa mmanụ– oroma, oroma nkịrịsị, mkpụrụ osisi grepu, wayo, mandarin, na ihe ndị ọzọ - so n’etiti ndị a kacha amasị.
Na-eche maka ịgbakwunye ụcha oroma na-enye ume ọhụrụ n’ime ụlọ gị? Ka ị ga - achọ ime ka obi dị gị mma? Site na diffuser emebere nke ọma site na AromaEasy, mmanụ oroma dị ụtọ nwere ike inyere gị aka na nke ahụ.
Diffusers AromaEasy vaporized mmanụ dị mkpa wee mezie ya ka ọ dịrị nwayọ ma na-agbanwe agbanwe. Mgbe ị na-arụ ọrụ, ọ na - enye mgbasa nke mmanụ oroma dị ụtọ dị na oghere gị niile. Ugwu na-adọrọ adọrọ ga-adịgide ruo ọtụtụ ọnwa n'ihi nkwalite na-esi ísì ụtọ na-aga n'ihu.
Okooko osisi nwere ike ịbụ ụdị atọ kachasị ewu ewu nke mmanụ mmanụ dị mkpa. Osisi dika bilie, Jasmine, na chamomile bụ ụfọdụ n'ime mmanụ dị mkpa ọtụtụ mmadụ nabatara. N'iburu n'uche oke ihe ọkụkụ a chọrọ iji mepụta, a na-ewere ụdị mmanụ a dị mkpa ka ọ bụrụ ihe kachasị ọnụ na kinda. Iji maa atụ, ọ na-ewe ihe dị ka paụnd iri pọọsụ ruru ihe dị ka paụnd ruru pọọsụ.
Mmanụ ndị dị mkpa amịpụtara ifuru na-enyekarị aka maka inye nkwado mmetụta uche na ime ka obi na uche gị dị jụụ. Ọzọkwa, mmanụ ndị dị mkpa ifuru bụ ndị pụtara ìhè maka ojiji na ngwaahịa nlekọta anụ, n'ihi na ha na-ezu ike ma na-eme ka ahụ dị jụụ.
Woody mkpa mmanụ
Mmanụ ndị dị mkpa amịpụtara n'osisi ahụ hụkwara ọtụtụ ndị n'anya, n'ihi na ha na-eme ka iche echiche na-enye aka ma na-enyere aka na usoro iku ume. Osisi dika cedarwood, sandalwood, na fir tinyere ihe ndia dum.
Itinye mmanu di nkpa iji mee ihe
Ọzọkwa, mmanụ ndị na-esi ísì ụtọ kachasị mma bụ okwu gbasara mmasị onye ọ bụla. Mgbe ịchọtara mmanụ ndị na - agwa obi gị okwu, ọ bụ oge iji nweta.
Y’oburu na ibu onye mbu na mmanu di nkpa, ka anyi tulee isi. Thezọ kachasị dịrị nchebe ma dị mfe iji nweta uru nke mmanụ dị mkpa bụ n'ụzọ dị egwu. Site tinye n'ọrụ ihe dị mkpa mmanụ disọrọ, a na-ekesasị mmanụ ahụ dị mkpa ikuku niile ma nwee ike ịbara onye ọ bụla nọ na mbara ahụ uru. Nke a bụ ụzọ kachasị mma iji mepụta gburugburu na-ewuli elu. Egosiputa Citrus mmanu di nkpa, dika lemon na oroma, ka atukwasi obi ha nke oma. Ekwekwala ka ihe ndị dị mkpa n’ọrụ mmanụ citrus ndị a bụrụ ihe na-akwado aka n’ikpo ikuku.
Difgbanye mmanụ dị mkpa nwere ike ịbụ ụzọ kachasị mma iji kwado ahụike na ọdịmma gị na ndị ị hụrụ n'anya, ọkachasị n'oge oge oyi na-efe. Site n’itinye mmanu mmanu mmanu dika manu eucalyptus, ma obu mmanu nri n’ime diffuser gi, inwere ike inweta ume iku ume.
Ozugbo ị chọtara ezigbo mmanụ maka gị, nyere gị aromatic oke na ihe ọ bụla anụ ahụ, nke uche, ma ọ bụ psychological chọrọ ị nwere ike, ihe mmanụ uru nwere ike n'ezie na-enwekwukwa site tụnyere ya na-arụkọ mkpa mmanụ.
Ọ bụ ezie na ịgwakọta mmanụ dị mkpa bụ nka na sayensị, enweghị n'ezie ụkpụrụ maka nke ahụ. Ndụmọdụ kachasị mma anyị nwere ike ịme maka mgbe ịmalite ịgwakọta mmanụ dị mkpa bụ icheta ihe ị jikọtara na otu esi amasị nsonazụ gị. Uru nke ịgwakọta mmanụ dị mkpa, site na ihe aromatherapy, bụ na ị nwere ike ịmepụta profaịlụ kemịkal ọzọ dị iche iche, nke nwere ike ịnye ọkwa zuru ụwa ọnụ iji lebara okwu ọ bụla ị nwere ike ịnwale.
Tupu iji mkpa mmanụ topically– jiri ụgbọelu mmanụ!
E wezuga na inye mmanu di nkpa ka akpukpo ogwu di nma, enwere ike iji ha mee ihe. N'iburu n'uche na mmanụ ndị dị mkpa na-etinye ike nke ukwuu, ịkwesịrị ijide n'aka mgbe niile ịgwagbu ya. Jiri mmanụ ụgbọelu dị ka aki oyibo, almọnd, ma ọ bụ ube oyibo, wee soro iji ndụmọdụ na ụzọ dilution.
Alakụba osisi na-enye ọtụtụ nhọrọ mgbe anyị na-ahọrọ mmanụ dị mkpa na-esi isi mma. Mgbe ọ bụla ị na-ahọrọ mmanụ dị mkpa, ọ dị mkpa iji naanị mmanụ dị mkpa site na a ntụkwasị obi dị mkpa na-eweta mmanụ Onye n’eweta mmanu di nkpa. Wepụta oge iji mụtakwuo gbasara mmanụ ndị ị nwere. Gị na ha nọdụ, kuo ha, mee nnyocha. Gwazie ha maka ihe ha bụ na ihe ha na-eme. Ọ bụrụgodị na ha abụghị ihe ndị masịrị gị mma, ha ka nwere ike ịka mma obibi ndụ gị.
Ihe kachasị mma ịhịa aka mmanụ 6 dị mkpa
Mmanụ dị mkpa iji nwee ntụkwasị obi